Ciidamada amaanka dowlada federaalka Soomaaliya oo xiray labo nin oo Al-Shabaab looga shaki qabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada amaanka dowlada federaalka Soomaaliya oo xiray labo nin oo Al-Shabaab looga shaki qabo
August 29, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Asakri kamid ah ciidamada amaanka ee dowlada federaalka Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah xiray labo nin oo looga shaki qabo kooxda Al-Shabaab kadib markii ciidamada ay howlgal ku qaadeen degmada Dharkeynlay ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka wasaarada amniga qaranka, Cabdikaamil Macalim Shukri oo la hadlay warbaahinta dowlada ayaa sheegay in ciidamada xireen labo nin oo Al-Shabaab looga shaki qabo.
“Ciidamada amaanka waxay xireen labo nin oo Al-Shabaab looga shaki qabo kadib markii ay ciidamada howlgal ku qaadeen meelo ay ku dhuumaalaysanyeen oo kuyaala degmada Dharkeynlay ee Muqdisho,” ayuu yiri Cabdikaamil.
“Hadda waxay ku jiraan baaritaan,” ayuu ku daray.
Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011, balse maleeshiyada ayaa sii wada weeraro dhimasho oo ay ka geysato caasimada.
July 11, 2016 Madaxweynaha Koonfurta Suudaan oo amar ku bixiyay xabad joojin
July 12, 2016 Xabad joojin ka jirta caasimada Koonfurta Suudaan ee Juba
May 9, 2018 Al-Shabaab oo haweenay dhagax ku dishay ay ku eedeeyeen in ay niman badan guursatay